२०७३ लाई २०७२ सालको खुलापत्र — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » साहित्य → २०७३ लाई २०७२ सालको खुलापत्र
२०७३ लाई २०७२ सालको खुलापत्र
April 14, 2016३७२ पटक
शुभ आर्शिवाद एवम् मंगलमय शुभकामना
सर्बप्रथम आज देखि तिमी उदायौ, म अस्ताएँ बुधवारका दिन उदाएकी तिमी त्रिहत्तरीको चमक मेरो भन्दा गाढा बनोस् तिम्रो शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना ।
प्रिय त्रिहत्तरी, तिमीसंग राति १२ बजे पछि बिछोड भयो । तिमी उदाउदाँ उदाउदै गर्दा मैले पुष्प गुच्छा अर्पण गर्न खोजे । म त अव कहिल्यै फर्कन नसक्ने गरी विदा लिएकी छु । समाजमा चल्ने समय चक्रमा १२ महिना पछि अवश्य नै तिम्रो पनि मेरो जस्तै अवस्था त हुनेछ नै । समय आउछ फर्कदैन यो विज्ञान सम्मत हो कसैले रोक्न सक्दैन । तर एक पटक पाएको समय, जीवन कति अर्थपूर्ण बने ? यो नै महत्वपूर्ण रहेछ । म त अभागिनी ! मंगलवार कुसाइतको दिन भन्छन् त्यसै दिन म आएँ र मंगलवार नै तिमीवाट विदा लिएँ । शुभ भन्दा अशुभ संकेत मेरै समयमा भएकाले मेरा लागि अशुभ त भयो नै तिम्रा लागि यस्तो दुर्दशा नआओस शुभकामना दिन चाहन्छु ।
म मेरो १२ दिनको उमेरमै भूकम्पको धक्काले आज लाखौ नेपालीलाई विल्लीबांठ बनाएको छ । भारतीय इशारा र विदेशीको प्रयोगशाला बनेको नेपालमा संघियताको नाममा देश टुक्राउने ग्रायन डिजाइनले मधेशीहरुलाई प्रयोगमा ल्याइयो । मधेशी आन्दोलनका नाममा नाकावन्दी सृजना गरेर दशै तिहार जस्ता पर्वमा पनि रुवाउनु सम्म रुवाउनु प¥यो ।
देशभर उल्लेख्य मात्रामा भएका सवारी दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना जस्ता घटनाले सयौँको ज्यान अकालमा गए । म अस्ताउँदा खोटाङ, डोटीमा भएका सवारी दुर्घटनाले समेत ठुलो सराप भोगेकी छु । मेरो कुकर्मले गर्दा म स्वर्गलोकमा जान सकेकी छैन् । अहिले मत्र्यलोकमै छु । एउटा मात्र सम्झना लायक कुरा नयाँ संविधान त दिएँ तर यति राम्रो संविधान दिएर पनि देश टुक्राउने चलखेल म अस्ताउदा सम्म जारी नै थियो । अहिले पनि होला । जे भए पनि प्रमुख राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरुले उत्कृष्ट संविधान ठानेकाले त्यसैमा चित्त बुझाएकी छु । मेरो पालामा गुन भन्दा अपसगुन बढी भए त्यसैले तिम्रो अवस्था मेरो जस्तो पापी बर्ष नबनोस ।
संविधान मैले दिएँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर मेरो इज्जत प्रतिष्ठा राखीदिनु, संघीयताको पुर्नविचार गर्दै कार्यान्वयनका लागि नेताहरुलाई सम्झाई बुझाई गर्नु, भुकम्पको मारमा थिलोथिलो बनेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि बिशेष ध्यान दिनु । देश टुक्रने खतरा छ । ख्याल गर्नु, राजनितिका नाममा लोभी पापीहरु धेरै मौलाएका छन् । तीनीहरुलाई लाठो लगाएर एक ठाँउमा ल्याउनु, अवसरको पखाईमा बसेका स्वाँठहरुलाई बिशेष ख्याल गर्नु, जताततै देखिएको भष्टाचार र बेथितीले देश हरिकंगाल बनेको छ । नेताहरुको चरित्र चरित्रबान छैन् स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले बजारमा भाउ पाउन छोडिसकेको छ । ओली जस्तै धेरै वोली भएका नेताहरुको मुखमा आवश्यकता पर्दा भोटे ताल्चा चाहिए मलाई खवर गर्नु ।
एक बर्ष भित्र देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने वनेर मलाई उल्लु बनाए । वोलीबाट मात्र जनतालाई उर्जा दिने उर्जामन्त्रीलाई ख्याल गर्नु भन्नु । बहिनी यस्तै छन् धेरै कुरा, कसैले सुनिदिएन विदेशीएका नेपालीहरुको पीडा, त्यसैले नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम आत्म निर्भर बनाउनु तिम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कसरत कदापी बाँकी नराख्नु । अवसर आउछ पर्खदैन भने झै तिमीले बेलैमा सबैलाई सचेत बनाउदै जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्दै अगाडि बढ्नु फेरी पनि तिम्रो आगमनको सफलताको कामना गर्दै तिम्रा अवसर सुनौला र ऐतिहासिँक वनुन् यती भन्दै पत्रको विट मार्छु ।
उहि तिम्रो स्नेही